नीतिकथा | Ratopati
दूधवालीको सपना access_timeमंसिर २८, २०७७
एउटा गाउँमा सीता भन्ने एक जना दूधवाली थिई । हरेक दिन ऊ दूधको भाँडा भर्ने गर्थी । उसको काम गाई दुहुने र बजारमा लगेर दूध बेच्ने थियो । सीता दूध बेचेको पैसा कसरी खर्च गर्ने भनेर सोच्ने गर्थी । सीता दूध भरेर बजार जाँदा बाटाभरि आफूले किन्ने सामानहरुका ब...
अनुहार हेरेर व्यवहार नगर्नू access_timeमंसिर ८, २०७७
एउटा मरुभूमि नजिक सुन्दर गुलाबको बोट थियो । ऊ आफ्नो रूपरङ्ग र सौन्दर्यमा मख्ख थियो । उसको एउटै गुनासो ऊ नजिक हुर्केको क्याक्टसको बोटसँग थियो । गुलाफको हेराइमा क्याक्टस कुरूप, नराम्रो र भद्दा थियो । प्रत्येक दिन त्यो गुलाफले क्याक्टसलाई खिसिट्युरी ग...
अङ्गुर अमिलो थियो access_timeमंसिर ८, २०७७
एक दिनको कुरा हो, एउटा फ्याउरो धेरै नै भोकाएको थियो । उसले सिकारको निक्कै खोजी गर्यो तर फेला पार्नै सकेन । खानेकुराको खोजीमा ऊ धेरैतिर डुल्यो । तर केही पनि फेला पार्न सकेन । डुल्दै जाँदा ऊ एउटा अङ्गुरको बोटमुनि आइपुग्यो । बोटमा लटरम्म अङ्गु...
प्रशंसा र आलोचना access_timeमंसिर ४, २०७७
कसैले सडकको किनारमा एउटा इनार खनायो । गर्मी ठाउँ थियो, सडकमा आउने जाने यात्रीहरु प्यास लाग्दा इनारबाट पानी निकाल्थे, पिउँथे । इनार खनाउनेको प्रशंसा गर्थे र भन्थे– “क्या गजबको ठाउँमा इनार खनाएछ ! आहा !!” केही समयपछि अँध्यारो रातम...
अपशकुन access_timeकात्तिक ३०, २०७७
एक किसानको आँगनमा एउटा सुकेको रुख थियो । उसको छिमेकीले एक दिन कुरै कुरामा कुरा मिलाएर भन्यो, “आँगनमा सुकेको रुख रहनु अपशकुन हो । यस्तो राखिराख्नु ठीक छैन !” किसानले भोलिपल्टै त्यो रुख काट्यो । रुख ढलेको मात्र थियो, त्यो छिमेकी डोरी लि...
बुद्धिमान बाँदरले यसरी ज्यान जाेगायो access_timeअसोज २७, २०७७
Title Photo Source: https://cdn2.momjunction.com एउटा नदीको किनारमा जङ्ल थियो । त्यो जङ्गलमा एउटा बाँदर बस्थ्यो । नदीमा गोहीका एक जोडी पनि बस्थे । एक दिनको कुरा हो । गोहीकी श्रीमतीले बाँदरको मुटु खाने इच्छा गरिन् र श्रीमान् गाहीसँग भनिन्, &l...
मूसा बन्यो सिंह access_timeअसोज ५, २०७७
जंगल नजिकको आश्रममा एकजना साधु बस्ने गर्थे । एक दिन उनले देखे– एउटा मूसोलाई बिरालोले खेदिरहेको छ । साधुलाई दया लाग्यो । उनले आफ्नो शक्तिले त्यो भागिरहेको मूसोलाई बिरालो बनाइदियो । बिरालो बनेपछि मूसाको ज्यान बच्यो । त्यो बिरालो साधुको आश्रममै बस्...
आपत परेको बेलामा मद्दत नगर्ने हो भने साथीको के काम ? access_timeजेठ ३१, २०७७
ठूलो जंगलको एक पोखरी नजिकै एउटा सानो हाँसको बच्चा बस्तथ्यो । उसलाई एक दिन साह्रै भोक लाग्यो । उसले आफ्नो भोक मेटाउनको लागि कीरा–फट्यांग्र खोज्न थाल्यो । तर उसले जति प्रयास गरे पनि कीरा–फट्यांग्रा समात्न भने सकेन । त्यस पछि ऊ दुःखी हुँदै ठूलो–ठूलो आव...
दुई भिक्षुको तीर्थयात्रा access_timeमंसिर १५, २०७६
सहान प्रान्तको अमेइपहाडमा थुप्रै बौद्धबिहार थिए । ती बिहारमा थुप्रै बौद्धभिक्षुहरु बस्थे । ठूला बिहारमा बस्ने भिक्षु धनी थिए । साना बिहारमा गरिब थिए । एकदिन सानो बिहारमा बस्ने एकजना भिक्षुले दक्षिण चीनसागरबीच एउटा द्वीपमा रहेको सुन्दर पर्वतमालाको यात्रामा ...
प्रतिज्ञा access_timeकात्तिक ६, २०७६
एकजना अफिसर थियो । ऊ जहाँ पनि पाएसम्म भ्रष्टाचार गर्थ्यो । घुस खान्थ्यो । दुनियाँका अगाडि बडो इमान्दारीको स्वाँग गर्थ्यो । एकदिन उसले छिमेकीका अगाडि प्रतिज्ञा नै गर्‍यो, “म घुस भनेपछि कुनै हालमा हात थाप्दिनँ । थापें भने मेरो हात कुष्ठरोगले कुहिएर झरोस् ! सुन्न...
दिशाहीनता access_timeअसोज ३०, २०७६
एक यात्रीले याङ्सी घाँटीनिर रहेको छू राज्यमा जाने निधो गर्‍यो र घोडा चढेर उत्तरतिर लाग्यो । बाटोमा भेट्टिएको एकजना मान्छेले भन्यो, “ए भाइ, तपाईं गलत दिशातिर जाँदै हुनुहुन्छ । ‘छू’ राज्य त यताबाट दक्षिणतिर पर्छ । दक्षिण पुग्न दक्षिणै जानुपर्&zwj...